Muvhuro, September 3, 2012 Muvhuro, September 3, 2012 Douglas Karr
Kunyangwe ndichiita kusimudzira kwakawanda, ini handizviratidze semusimudziri wechokwadi. Ini ndinogona kuronga uye kufambisa zvinhu kutenderera pane peji uye riite kuti rishande. Mugadziri wechokwadi anonzwisisa maitiro ekuvandudza kodhi kuti igone kuyerwa, kwete kutora zviwanikwa zvakawanda, kutakura nekukurumidza, kugadziriswa zviri nyore gare gare uye zvichiri kushanda.
Nzvimbo yakaoma iyo vatengesi vanoiswa mukati ndeyekuti vese vane yakakurumidza webhusaiti uye uchiri kubatanidza kusanganisa uye zvemagariro zvinhu izvo zvinogona kuumba kutsamira pakukurumidza saiti yako saiti. Mumwe muenzaniso wakadai mabhatani emagariro. PaMartech, isu tinemagariro mabhatani pane yega yega peji pane ino saiti. Saka… kana Facebook zviwanikwa zvichitakura zvishoma rimwe zuva, zvinodzora yedu saiti. Wobva wawedzera Twitter, Pinterest, Buffer, nezvimwewo kune izvo uye yako saiti mikana yekukasira nekukurumidza inoderedzwa kuita chero chinhu.
Izvo zvinozivikanwa sekufananidza kurodha pasi. Iwe unofanirwa kupedzisa kurodha chinhu chimwe pamberi iwe unoremedza chinotevera chinhu. Kana iwe uchikwanisa kurodha zvinhu asynchronously, iwe unokwanisa kutakura zvinhu pasina kutsamira pane mumwe nemumwe. Unogona kuvandudza zvakanyanya yako saiti kumhanyisa nekuisa zvinhu asynchronously. Dambudziko nderekuti zvinyorwa-zve-mubhokisi zvinopihwa nemakambani aya hazvimbofi zvakagadziridzwa kumhanya asynchronous.
Unogona kuona chiri kukanganisa peji rako nekumhanyisa bvunzo paPingdom:
Heino snippet yemabatiro ekuti uzviite nemazvo kubva Emil Stenström: